Ụbụrụ Brain: Neuroplasticity | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Ụdị Ihe Mgbochi Neuroplasticity
Okwu neuroplasticity na-agbada neuro maka "neuron", ụbụrụ akwara na ụbụrụ na ụbụrụ anyị. plastic bụ maka “nke na-agbanwe agbanwe, nke a pụrụ ịgbanwe agbanwe, nke nwere mgbanwe.” Neuroplasticity na-ezo aka n'ikike ụbụrụ ịgbanwe n'ọnọdụ nzaghachi na ahụmịhe. Thebụrụ na-eme nke a site na iwusi njikọ dị n'etiti ụfọdụ mkpụrụ ndụ akwara ma na-eme ka njikọ dị n'etiti ndị ọzọ ghara isi ike. Nke a bụ otú ụbụrụ si echekwa ihe ncheta, mmụta, mmụta na mgbanwe maka ọnọdụ mgbanwe. Principleskpụrụ abụọ na-achịkwa ụbụrụ ụbụrụ:
Akpa, mkpụrụ ndụ akwara na-ejikọ waya ọnụ ' pụtara na ihe abụọ nwere ike ijikọ ọnụ ma ọ bụrụ na ha mere n'otu oge. Dịka ọmụmaatụ, nwatakịrị na-emetụ stovu dị ọkụ na nke mbụ ya na-arụ ọrụ ma mkpụrụ ndụ akwara na-arụ ọrụ nke visve-elu na sel nerve nke na-enwe ihe mgbu na-ere ọkụ. Ihe abụọ ndị a na-ejikọtabeghị na njikọ na-adịgide adịgide na ụbụrụ site na alaka alaka akwara. Imageshụ ihe onyonyo na-akpali agụụ mmekọahụ na nke mbụ ga-eme ka ncheta echedoro na ụbụrụ nwatakịrị ma bido ịkpụzi ya na agụụ mmekọahụ ya.
Nke abụọ, 'jiri ya ma ọ bụ tufuo ya' kachasị adaba n'oge windo ụfọdụ nke mmepe. Ọ bụ ya mere o ji dị mfe karị ịmụta ụdị ọrụ ma ọ bụ akparamagwa ụfọdụ afọ. Anyị anaghị ahụ ndị egwuregwu mmega ahụ n’abalị iri na abụọ bidoro mgbe ha dị afọ iri na abụọ ma ọ bụ ndị egwu egwu bidoro mgbe ha dị afọ iri abụọ na ise. Oge ntorobịa bụ oge iji mụta banyere mmekọahụ. Mkpụrụ ndụ akwara so na ịntanetị na ịpị site na ọnọdụ gaa ọkụ na ndị na-enwe mmekọahụ na obi ụtọ. Usoro sistemụ limbi ya na - arụ ọrụ ya: imetụ stovu = mgbu; sọọfụ porn saịtị = obi ụtọ. Kwụsị ihe omume na-enyere aka belata mkpakọrịta.
Bụrụ anyị bụ akụkụ nke usoro ụjọ ụjọ gbatịrị agbatị. Ọ na-agụnye usoro nchebe nke etiti (CNS) na usoro nhụjuanya (PNS). CNS nwere ụbụrụ na ụbụrụ. Ọ bụ n'ụzọ bụ isi ebe nchịkwa na-anata ihe ọmụma mmetụta niile sitere na ahụ dum na ọ nwere ike gbanwee iji mee ka nzaghachi dị mkpa - ịbịaru, ịdọrọ ma ọ bụ 'dị ka ị dị'. Banyere azịza a kapịrị ọnụ ọ na-eziga mgbaàmà site na PNS. Ya mere, ihe onyonyo, isi, mmetụ, uto ma ọ bụ mkpakọrịta mkpakọrịta ga-eme ka ụzọ agụụ mmekọahụ si ụbụrụ pụta gaa akụkụ ahụ site na usoro ụjọ n'akụkụ nke abụọ.
Hasbụrụ nwere ihe dị ka ijeri akwara 86 ma ọ bụ akwara ozi. Mkpụrụ akwara ma ọ bụ akwara ahụ nwere sel nke nwere ihe nwere mkpụrụ DNA. N'ụzọ dị oke mkpa, ọ nwekwara protein ndị na-agbanwe ọdịdị ka ha na-emegharị maka ntinye nke ozi sitere n'akụkụ ọzọ.
Neurons dị iche na sel ndị ọzọ n'ime ahụ n'ihi na:
1. Neurons nwere akụkụ akụkụ pụrụ iche a na-akpọ dendrites na axons. Dendrites na-eme ka eletriki eletrik gaa na ahụ mmadụ na axons wepụ ihe ọmụma site na ahụ mmadụ.
2. Neurons na-ekwurịta okwu n'etiti onwe ha site na usoro nlekota.
3. Neurons nwere ụfọdụ akụkụ pụrụ iche (dịka ọmụmaatụ, synapses) na chemicals (dịka ọmụmaatụ, ndị na-anọchite anya neurotransmitters). Hụ okpuru.
Neurons bụ mkpụrụ ndụ ndị ozi na mpaghara ụjọ. Ọrụ ha bụ izipu ozi site n'otu akụkụ nke ahụ gaa na ọzọ. Ha nwere ihe gbasara 50% nke mkpụrụ ndụ n'ime ụbụrụ. Onye ọzọ dịka 50% bụ mkpụrụ ndụ na-abaghị uru. Ndị a bụ mkpụrụ ndụ na-adịghị na neuronal nke na-elekọta homeostasis, na-emepụta myelin, ma na-enye nkwado na nchebe maka neurons n'ime usoro nhụjuanya nke etiti na usoro nhụjuanya gburugburu. Mkpụrụ ndụ Glial na-arụ ọrụ dịka ihichapụ mkpụrụ ndụ nwụrụ anwụ na ịrụzi ndị ọzọ.
Mkpụrụ obi na-eme ihe anyị chere dị ka 'isi awọ'. Mgbe axon, nke nwere ike ịbụ ogologo oge ma ọ bụ mkpụmkpụ, nke ihe ọcha (myelin) na-eme ka ọ bụrụ nke a, nke a na-enye ohere ka akara ngosi gafere ngwa ngwa. Ihe mkpuchi a na-acha ọcha ma ọ bụ mmelite, bụ ihe a na-akpọkarị 'ihe ọcha'. Dendrites ndị na-enweta ozi anaghị enweta akwụkwọ. Ụbụrụ nwa na-ejikọta ụbụrụ ụbụrụ na ụzọ. Ọ na-agbatịkwa njikọta site na ịmalite.
Njirimara eletriki na chemical
Ụmụaka anyị na-ebu ozi n'ụdị nke eletrọniki a na-akpọ nhụjuanya akwara ma ọ bụ ihe omume. Iji mepụta mkpali akwara, ọkpụkpụ anyị kwesịrị inwe obi ụtọ, n'ihi echiche ma ọ bụ ahụmịhe, iji zipụ ikuku na-agbapụ ogologo nke cell iji kpalie ma ọ bụ na-egbochi ndị na-ahụ maka ntanetị na njedebe nke axon. Mmetụta ndị dị ka ìhè, ihe oyiyi, ụda ma ọ bụ nrụgide na-eme ka mkpịsị ụkwụ sensory anyị dị. [/ X_text] [/ x_column] [/ x_row]
Ozi nwere ike ịba site na otu neuron gaa na ọzọ neuron gafee ọdịda ma ọ bụ ọdịiche. Neurons adịghị emetụ ibe ha aka, nke synapse bụ obere oghere na-ekewa eriri. Neurons ọ bụla nwere ebe ọ bụla n'etiti njikọ 1,000 na 10,000 ma ọ bụ 'synapses' ya na ndị ọzọ. A ga-ejikọta ihe ncheta nke eriri nke na-esi ísì, anya, ụda na ịmịkọrọ aka.
Mgbe mkpali akwara ma ọ bụ ikike ime ihe na-aga ma rute na njedebe nke axon na njedebe ya, ọ na-ebute usoro dị iche iche. Na ọnụ ya, e nwere obere vesicles (akpa) jupụtara n'ọtụtụ neurochemicals nke na-eme ka ụdị nzaghachi dị iche iche mee. Ihe mgbaàmà dị iche iche na-arụ ọrụ vesicles nwere neurotransmitters dị iche iche. Ngwongwo ndị a na-aga na njedebe nke ọnụ ma hapụ ọdịnaya ha na synapse. Ọ na-esi na neuron a gafee nkwụsị ma ọ bụ synapse ma na-akpali ma ọ bụ na-egbochi neuron na-esote.
Ọ bụrụ na enwere ọda ma ọnụọgụ nke neurochemical (dịka dopamine) ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ nke ndị natara, ozi ahụ na-esiwanye ike ịgafe. Ndị mmadụ na-arịa ọrịa Parkinson enweghị ike igosipụta dopamine. Ọkwa dị elu nke neurochemicals ma ọ bụ ndị nabatara sụgharịrị n'ime ozi siri ike ma ọ bụ ụzọ nchekwa. Mgbe onye na-egwu porn na-adabere n'ihe na-akpali akpali mmetụta uche, ụzọ ndị ahụ na-arụ ọrụ ma na-ewusi ike. Ọdụdọ eletrik na-agafe ha n'ụzọ dị mfe. Mgbe mmadu kwusiri omume, o were obere mgbali iji zere uzo ahu nke iguzogide ya ma odi mfe.
Neuromodulation bụ nyocha usoro nke e nyere neuron jiri otu ọgwụ ma ọ bụ karịa iji chịkwaa ọtụtụ mmadụ nke neurons. Nke a dị iche na oge ochie transnaptic nnyefe, nke otu neuron presynaptic na-emetụta otu onye mmekọ postsynaptic, otu onye na-enyefe ozi. Ndị na-ahụ maka ozuzu na-ezo site na nnukwu akụkụ nke usoro nhụjuanya, na-emetụta otutu eriri. Nnukwu neuromodulators na etiti mba na-agụnye dopamine, serotonin, acetylcholine, histamine, na norepinephrine / noradrenaline.
A na-eche na ọ bụ neurotransmitter nke na-adịghị eme ka ọkpụkpụ na-eme ka a ghara ịmịnye ya na ya. metabolite. Ndị neuromodulators dị otú ahụ kwụsịrị iji oge dị ukwuu n'ime mmiri ọgwụ (CSF), na-emetụta (ma ọ bụ "ịmegharị") ọrụ nke ọtụtụ neurons ndị ọzọ na ụbụrụ. N'ihi nke a, a na-ewere ụfọdụ ndị na-ahụ maka ntanetịpụta dị ka ndị na-adịghị achọpụta ọbara, dịka serotonin na acetylcholine. (lee wikipedia)
<< Mbido mmepe nke ụbụrụ Neurochemicals >>